Zvandinoda Munhu Wose Anoziva NezveDhenesa Kuchenesa. - bestpvcfence.com
Products PVC fence Company News Privacy fence Picket fence Pool fence
Fence kuchenesa Haisi chete yakananga kuisa vinyl fences, zvisinei ivo vari pamwe chete zvakananga kushambidza uye kuve nechokwadi. zvakafanana nehutanda hwose, vinyl inosvibiswa uye inoshuva kucheneswa nekuchengetwa kuti igare iri ichiedza kuedza kunoshamisa kwegore rose.A Garden Hose- izvi zvinowanzoita zvose zvakanakisisa kuvonga kwekutarisira vinyl fence yako uye inogona kuitwa a ...
Hazvisi izvo zvakananga kuisa muvinyl fences, zvisinei ivo vari pamwe chete zvakananga kushambidza uye kuve nechokwadi. zvakafanana nehutanda hwose, vinyl inosvibiswa uye inoshuva kucheneswa nekuchengetwa kuti igare iri ichiedza kuedza kunoshamisa kwegore rose.A Garden Hose- izvi zvinowanzoita zvose zvakanakisisa kuvonga kwekutarisira vinyl fence yako uye inogona kuitwa chinonyanya kamwe kamwe pamwedzi zvishoma. kubvisa fence yako kunobatsira kuchenesa nzvimbo yakasvibiswa uye inoichengeta kubva pakuwana yakakanganiswa nevhu rakawanda kwemwedzi kana makore.
Soft Scrub uye asina zivo yakananga - Soft Scrub uye asina zivo yakananga zvakanyatsogadziriswa kugadzirisa tsvina uye tsvina pavinyl. iwe unogona kuda kushandisa sarudzo yekuchenesa nechinhu chekucheka kana bruki rakaderera kuitira kuti usatora vinyl yako.
Mr. Clean's Magic inoshandisa- The Magic Eraser inogona kunge yakave yakachengeteka uye yakajeka kuvonga kuti ibvise mararamiro anogara akareba. Zvose zvaunoda kuedza uye kuita zvinopedza kushandiswa uye ndizvo izvo.
Simba Kushambidza- Kana vinylini yako yakave isina kucheneswa kwenguva shoma, simba rekushamba rinogona kunge riri izvo zvaunoda. Kushingaira kunobva kumvura kuchabvisa chero tsvina imwe neimwe uye inogona kuva yakakosha zvikuru kupfuura pipepipe
Kana uine tani vinyl fence kana rumwe ruvara rusina chichena, tendesa kuverenga mavara pamusoro pekugadzirisa matanho aya kuitira kuti arege kubvisa fence yako.
Vinyl fence yakakwana kuti iite tsvina, hapana kuwanikwa kune iyo. Chero bedzi iwe uchichengetedza au fact iyo mwedzi woga woga uye uchipa iyo kubviswa nokukurumidza kana kusvetuka, vinyl yako fence inogona kuramba iri kuedza yakasiyana.
Ko vinyl fence inhibition inotyisa sei? kunyange zvakadaro vinyl fence inomira muchitonhora here? Ko vinyl fence ichapera here? asi kwenguva yakareba sei vinyl fence inoguma? kunyange zvakadaro vinyl fence inomira munzvimbo dzagara dzichiuya nemhepo ine simba here? kunyange zvakadaro vinyl fence inomira munzvimbo dzine mvura inonaya kana kuti chando? kunyange zvakadaro vinyl fence inoita mumhenderekedzo yegungwa here?
Iko kushambadzira kwakagadzirwa sei?
Semuenzaniso, chii chakareba rusvingo rwechigadzirwa chako uye chii chaicho chekudzivirirwa kwemazuva ekuchengetedzwa kwemhepo kwakashandiswa kuhomwe yeko? masangano mazhinji mukati memusika anobatsira zvikuru kubva kune zvinoitwa nevatengi kuti yese imwe vinyl fence inogadzirwa nefekitari yakafanana. Vanosiya zvinhu zvakasungwa uye vanotaura zvinhu zvakakodzera uye vanopa pfungwa dzenhema yekuchengetedza kuburikidza nekunyengera kukurudzira uye kukwirira mari. Kana iri yakakwirira-yakatengesa inofanira kuva yakachenjera pane izvozvi? Zvakanaka kwete nguva dzose.
Kana iwe usingaiti kuongorora kwako iwe unogona kunge uri kubhadhara "zvakanakisisa" (yakakwirira) kukosha uye kugamuchira "zvakanaka" chigadzirwa kana zvimwe zvakashata chimwe chinhu chinokuvadza icho pasina mubvunzo hachizoperi. Mumusika mumwe nomumwe kana unosanganisira mutengo kune nguva dzose yakatendeseka, yakanaka, uye yakanakisisa sarudzo. Ndinoona nzira zvakare zvakare mukati memabhizimisi evhareji venguva refu vanokweretesa zvakakosha uye kuwana asi zvine musoro. Kana iwe uchitevera mazano aya akakwirira kudarika iyo ichaita kuti iwe usapedzisira mamiriro ezvinhu. Vinyl fence inogona kuva chinhu chinonakidza uye inogona kuwedzera mutengo mumba mako nepfuma. Iwe kuongorora kwako kunomutsa mibvunzo yakawanda iyo mutengo unobhadhara zvishoma zvakawanda kana zvichidiwa? Kubhadhara zvishoma uye kuongorora kwako kwose kunogona kuvawo musiyano pakati pefence ichagara kwemakore anoverengeka kudzoka uye fence isingagari kwenguva refu kupfuura gore kana 2.
Kana zvinosanganisira kusarudza rudzi rwefence, pane kupararira kwezvinhu zvokufunga nezvazvo, pamwe chete nematanda, simbi, ketani yekunamatira, uye al yemhando. Vinyl, zvisinei, yakava imwe yezvinhu zvose zvinotungamira zvekuvhara. Zvakaderera zvakakosha, zvakanakira kutarisira, uye zvinosvika pakusarudzwa kukuru kwemavara.
Low maintenance: Vinyl fence inoda kunyanya kugadziriswa. hapana kusha kwekugadziriswa, uye maitiro uye dzimwe nzira dzakashata hazvizoshandisi fense senzvimbo tsvene. Muzvinhu zvakawanda, kushambidza kushambidza nesipo nemvura kamwe chete mwedzi mumwe chete unogona kuita kuti fence yako iedze kupinza.
Kwete-chepfu uye inogona kushandiswa zvakare: Vinyl inogona kunge isiri iyo inotyisa uye haibatanidzwi nemakemikari kana ichigadzirwa nefekitari uye ichadzorerwazve kana isingadiwi.
Mari-inoshandiswa: Inofananidzwa nehuni nehuni hwehuni, vinyl dzimwe nguva inodhura. Izvi zvinowanzoitika zvechokwadi kana iwe uchifunga pamusoro pako ungasava nehupi hunosanganiswa nekugadzirisa kwekugadzirisa / kudzorera vinyl fence yako nekushisa kana kukuvara kwezvipembenene.
Mamiriro okunze akanyanya kuitika: kana inosanganisira nguva yakanyanyisa, mhepo inopisa inogona kuita. Kumusoro kwekumusoro? Kunze kwechando? Mamiriro okunze ane utsinye ane tsvina yakaoma uye kutonhora kwakanyanya here? Kunyadziswa? matanda semamiriro ekunze? Kwete dambudziko. zvakabatana zvakanaka kumhenderekedzo dzegungwa dzinogadzira demo resimbi nehuni. Vinyl haingashambi kana kuora uye inoramba yakasimba. H2O anobudisa pachena haazokonzeri kuputsika mukati memashoko kana kukonzera kuora.
Easy install: Vinyl fences yakagadzirirwa zvakananga kuti nyore nyore kuiswa. Iwe haufaniri kunge uine unyanzvi hwokuisa mufence yako. Kana imwe nguva zvigadziriswa, shandisa mukati uye nekuchengetedza iwe mapurisa asinganzwisisiki, ipapo chengetedza mapikete ako akajeka mukati mematope. zvakananga uye nyore!
Mhando dzakasiyana-siyana: Pane mavara mazhinji akadaro iwe uchakwanisa kusarudza kana inosanganisira huni nesimbi yekuvhara, kunyange zvakadaro kana ukasarudza vinyl, iwe unowedzera kushamisa kwemavara kusarudza kubva pane izvo zvakanyatsoenderana nemhepo yako , zvinonaka, uye / kana imba yemuvara.
Vinyl fence nechepamusoro
vinyl fences mumhenderekedzo yegungwaIkuderera kukuru kunotarisana nemasvingo emhenderekedzo mumhenderekedzo yegungwa ndeyokuti mamiriro okunze egungwa. vakawanda vanosimudza America asi vinyl inofananidzwa kune dzakawanda zvemahombekombe ekare, vachitarisira kuwedzera nguva yehupenyu yefence yavo itsva kune imwe nzvimbo yakasara iyo yefense iyo inotsiva. isu tinowanzofarira kufara kuvadzidzisa kuti kukanganisa uye kubvarura mamiriro ekunze kunokonzera matanda avo, simbi, uye masvingo akakomba hazvina zvazvinoita pane yedu yepamusoro yakawanda yekudzivirira.
Runako rwegungwa rine maganhu aro, zvisinei nemamiriro okunze uye naizvozvo kuverenga kunoparadza uye kunoparadzwa nekunze kwechigadzirwa, kufanana nedanda. Bhati, kana mvura yemunyu, inotakuriswa pamhepo, uye inoparadzirwa kana kuita gungwa, uye haigoni kudziviswa zvachose nemasvingo mukati memhara. Madziro eWooden anonzva mvura yerinyu, inokonzera kutuka, kuora uye kuora. kazhinji idzi idzi dzakaoma dzinowira uye dzinowedzerwa ne bryophyte uye dzimwe mbeu.
Matanda ematare, angave kana asina kukwana kana kushandiswa, akavharidzirwa, asina chinhu kana akaiswa pevara, ruvara ruchaita kuti simbi isunge uye iwire pasi.Vinyl fences haingashambi, corrode, kuparara, splinter, crack, peel. Vinyl inogara yakasimba, yakachena uye inofadza, gore iro gore rinenge rakaita briny.
Mvura, sezvakaita marine, inokonzera nyaya dzakawanda. huni dzomuti dzinoda kudzivirirwa kwemwedzi mitanhatu kana zvishoma kwegore roga rega, kutakura kune nguva inogara ichidonha mvura. Pakupedzisira, masvingo emiti anogona kukonzerwa nemvura uye anotanga kuvhara, kuputika, kuputika nekuora. Zvinotora makore kuitira kuti musoro udzoke, kunyange zvazvo iyo nzira inotanga zuva iwe huni hwaro hwehuni huiswa mukati, uye naizvozvo fence inova yakaipa, isina kusimba, yakashata uye isingakwanisi kusvitsa nguva refu isati yapera zvachose.
Sirasi uye yakasimba kugadzirisa nemvura nenzira imwecheteyo iyo yavanoita nayo inonzi brine, inogadzirisa uye inodikanwa yakakwirira-inotengeswa ichienderera mberi kugadziriswa kuti igare yakanyengedza uye inogutsa.Vinyl, kune rumwe rutivi, ichasimudzirwa kunzvimbo yakatarisa apo isingaiti kupisa, kupisa, kupenga kana kufungidzira. iwe unogona kunge uchifanira kutora vinyl fence yako kuti uichengetedze kune mamiriro ekunze asina kunaka, ihwo hutsika husina kuchengetedza hucharamba huchiwedzera hupfumi hwako huchangobva kuitwa kana huni hwehuni.
Kupisa ndiko kuti izvo zvinoshandiswa zvakavanzika zvichange zvichiwedzerwa kune mvura kana kuti mvura yakasvibiswa kuti iite chakanyanya kukuvara kumapuranga nematare esimbi. Kunopisa mvura kana kuti brine yakavezwa huni ndicho chinokonzera kupfupa, kuputsa uye pakupedzisira kupera. Izvo zvinoumba utera hunozopedzisira huchaparadza matanda emiti.
Sirasi naFe, kune rumwe rutivi, vanogona kusvibiswa mumvura yakakwirira uye kupisa kwezhizha. Zvakare, kusanganiswa kwemvura kana marine uye kushambidzika kunokonzera kukura kwehutano nekukura. Iko kubuda kunoita kuti mapikisi aite zvakanaka uye inoita nzira yakakwana yekutamba fence yako nokukurumidza uye yakawanda inoshamisa.
Isu tinovimbisa kuti kana iwe wakagadzira vinyl fence yedu mujare rako, unogona kunge usina chimwe chinhu chokufunganya kubva pamhenderekedzo yako yegungwa, brine kana mvura.
Ikozvino inokurudzira kunyengera muvinyl fence yekutengesa fence ndeye zvose asi yakaoma fence inofananidzwa kune yakasiyana. Ndinowanzobvunzwa asi zvakasvibiswa yako vinyl fence, sekunge iri ndiro shoko rokupedzisira kugadzirisa nyaya yeyo Fence Company mumwe munhu anogona kutenga fence yavo kubva. ndawana munguva pfupi ichangobva kuwanda uye dzimwe nhengo dzichigadzira zvirevo zvekuti fence yavo ndeyekuti yakawanda uye nzira iyo makwikwi haasi akaenzana uye ipapo akaderera.
Izvo zvikwata zvakawanda zvinokundikana kukakavadzana ndezvokuti chimwe chezvinhu zvose zvakakosha zvakakosha mukuti kana kwete fence inogona kutarisa kunzwisisika kwemakore kudzoka ndeyechokwadi thinnest chikamu chepambo. Dzidzo yezuva ranhasi inobvumira vinyl fence kuti ibudise-chekuta iyo inoratidza kuti kana iwe ukaongorora kumusoro kwevinyl post fence kana rail iwe unongogona kuona 2 zvakasiyana zvakakwana. Kunze kwekunze kana kupfeka-kupfeka (chando chinotyisa chine ngozi) ndicho chine makemikari anochengetedza fence kuti aite kwemakore kudzoka. Iko mukati-kati (iyo yakaoma chikamu) inowedzera kukosha nekuti inobatsira kusagadzikana uye kushandiswa kwemakemikari akawanda. Kunze kwemakemikari kunotyisa zvakanyanya-uye mutengo uri mono extruded uye uwandu zvichida kuenda kune zvishoma zvemakemikari akanaka kana iyo extruder ichiedza kuva nechinangwa chekutendeseka. saka hazvisi izvo zvinokosha asi yakaoma vinyl fence yemiti, asi zvipi zvemakemikari zvinosanganiswa mune zvekutengesa, uye kupi. Imwe nzira yekudzivirira inyanzvi uye inoda kuchengetwa nguva dzose kuti ipe mamwe makemikari akakodzera ari kuwanika munzvimbo yakakodzera, mukati memari yakakodzera. Zvose zvine chokuita nekugadzirisa mukati. Ani naani achakandira imwe yendima yeganda iri mumutsetse wakanyanyisa uye inobuda vinyl, zvisinei kana ichigone? Ndakatarisa zvivako zvakawanda zvekudzivirira uye ndinoshamiswa nekusiyana kwemukati yekudzora nzira iyo yese yekambani iyo yakatevera. Vamwe vanoita sekuti vanongomhanyira zvinhu zvekutengesa uye vanozvigadzirisa. Vamwe vanobhadhara nguva yakawanda uye simba kuchengetedza mutengo wezvokutengesa uye kuidziidza iyo inogunzva, marara, uye hupenyu hurefu.